कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २९ गते सोमबारको रा’शिफल ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २९ गते सोमबारको रा’शिफल !
वि.सं.२०७७ असार- २९,सोमवार, ई.सं. २०२० July -१३,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० दिल्लागा,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,श्रावण कृष्णपक्ष तिथि-अष्टमी , १६:५२ बजे उप्रान्त नवमी,नक्षत्र-रेवती ११:०२ बजे उप्रान्त अश्विनी,योग-सुकर्मा , २३:२० बजे उप्रान्त धृति, करण-कौलव १६:४२ बजेदेखि तैतिल , ४२:४९ बजे उप्रान्त वणिज,चन्द्रराशि-मीन,आनन्दादि योग-मातंग,सूर्योदय-५:१८,सूर्यास्त-१९:००, दिनमान-३४ घडी १५ पला,पञ्चक ११:०२ बजे समाप्ति। व्रत/पर्व- गोरखकाली पूजा। आदिकवि भानुभक्त जयन्ती।
पुराना साथि भेटिने तथा प्रेम प्रसङगमा दिन खोलेर रमाउन सकिनेछ । प्राबिधिक शिक्षामा खोज तथा अनुशन्धानमा समय खर्चिने हरुले उत्कृष्ट नतिजा हात लगाउनु हुनेछ । तपाईको ब्याक्तित्वमा निखारता आउँने तथा सुन्दर पहिरनमा ठाटिएर अरुको मन लोभ्याउन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । तरपनि बिहानको समय मध्ययम रहेकोले स्वास्थ्यको ख्याल गनुहोला।
पढाई लेखाईमा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउने हुनाले आत्मबल बढेर जानेछ । पहिले गरिएका लगानिबाट आम्दानि हुन थाल्नेछ भने नया ठाउमा लागनि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । शिक्षा तथा बौद्धिकताको प्रयोग गरि क्षमता बढाउन सकिने तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि फस्टाएर जानेछ । पैत्रिक धन हात लागि हुने योग रहेकोछ भने पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानि हुनेछ।
कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी आम्दानी गर्न सकिनेछ । आज थालिएका जुनसुकै कामहरुबाट भनेजस्तो कमाई हुँने हुँदा आर्थिक क्षेत्र मजभुत हुनेछ । नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाईने हुँनाले पद प्राप्तिको गतिलो योग रहेकोछ।
आफन्त तथा परिवारजनको साथ तथा सहयोग पाईने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ भने माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । नया योजना कार्यान्वयनको उपयूक्त समय रहेकोछ भने खोज तथा अनुशन्धानमा समय खर्चिने हरुले सकारात्मक उपलब्धिहरु हात पार्ने योग रहेकोछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले आफन्त तथा अग्रजसँग मनमु’टाब बढ्नेछ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले भौतिक सम्पति तथा विलाशी बस्तुको व्यापार गरि मनग्गे धन सम्पति जोड्न सकिनेछ । लामो दुरिको व्यापारीक यात्रा हुनेछ । पढाई लेखाईमा एक कदम अगाडि बढि सफलता हात पार्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट सामान्य बिवादले अपठरो परिस्थितिमा लैजान सक्छ ध्यान दिनुहोला । पुराना समस्या बल्झने तथा नया समस्याहरु थपिनेछन् । अध्ययन तथा अनुशन्धानमा समय खर्चिए पनि भनेजस्तो उपलब्धि नहुदा त’नाब बढ्नेछ।